လစ်လီယာ့စ် အမ်းစထရောင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
လစ်လီယာ့စ် အိဗ်လင်း အမ်းစထရောင်း (အင်္ဂလိပ်: Lilias Eveline Armstrong[မှတ်စု ၁]) သည် အင်္ဂလိပ် သဒ္ဒဗေဒ (အသံထွက်ပညာရပ်) ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ လန်ဒန် တက္ကသိုလ်ကောလိပ် (University College London) ကျောင်းတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့၍ ထို၌ တက္ကသိုလ် အကြီးတန်းကထိကရာထူး (Reader) ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဆိုမာလီဘာသာစကား၊ ကစ်ကူးယူးဘာသာစကားများ၏ တက်ကျသံ၊ သဒ္ဒဗေဒနှင့် လေယူလေသိမ်း စသော အားထုတ်လုက်ကိုင်မှုများကြောင့် အမ်းစထရောင်းကို လူသိအများဆုံးဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်လေယူလေသိမ်း စာအုပ်ကို အီဒါ စီ ဝါ့ဒ် နှင့် တွဲဖက်ပြုစု၍ နှစ်ပေါင်း (၅၀) ကြာကြာ ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေရသည့် စာအုပ်ဖြစ်ခဲ့လေသည်။ သူမသည် ဆိုမာလီ၊ ကစ်ကူးယူး ဘာသာစကားများ၌ တက်ကျသံများကို ပထမဆုံး အသေးစိတ် ဖော်ပြချက်အချို့ကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့၏။
လစ်လီယာ့စ် အီး အမ်းစထရောင်း
(1882-09-29)၂၉ စက်တင်ဘာ၊ ၁၈၈၂
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ကရှီးယား၊ ပန်ဒယ်လ်ဘယ်ရီမြို့။
၉ ဒီဇင်ဘာ၊ ၁၉၃၇(1937-12-09) (အသက် ၅၅)
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ မြောက် ဖင့်ချ်လေဆင်ခြေဖုံးနယ်၊ မစ်ဒယ်လ်ဆက်စ်
လစ်လီယာ့စ် အိဗ်လင်း ဘွိုင်းယန်နာ့စ်
ဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ လိဒ်စ်တက္ကသိုလ်၊ (၁၉၀၆)
လန်ဒန် တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကျောင်း (University College)၊ သဒ္ဒဗေဒဌာန။
ဆိုင်မန် ချားလ်စ် ဘွိုင်းယန်နာ့စ် (m. ၁၉၂၆–37)
အင်္ဂလန်မြောက်ပိုင်းတွင် ကြီးပြင်းခဲ့သော အမ်းစထရောင်းသည် လိဒ်စ်တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့၏။ ယင်းတက္ကသိုလ်တွင် ပြင်သစ်၊ လက်တင်ဘာသာစကားများကို လေ့လာခဲ့၍ လန်ဒန်ဆင်ခြေဖုံးရှိ မူလတန်းကျောင်းတွင် ခေတ္တမျှ ပြင်သစ်စာသင်ကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် တက္ကသိုလ်ကောလိပ်ကျောင်းမှ ဒန်းညာ ဂျုံးဇ်ဦးဆောင်သော သဒ္ဒဗေဒဌာနတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူမ၏ ထင်ရှားသောလက်ရာများမှာ၁၉၂၆ ခုနှစ်ကထွက်ရှိသော "A Handbook of English Intonation" (အင်္ဂလိပ် လေယူလေသိမ်း လက်စွဲ) စာအုပ်ဖြစ်၍ ဝါ့ဒ် နှင့်အတူ ပူတွဲရေးသားခဲ့သည်။ ထို့နောက် "The Phonetic Structure of Somali" (ဆိုမာလီဘာသာစကား သဒ္ဒဗေဒ တည်ဆောက်ပုံ, ၁၉၃၄) နှင့် "The Phonetic and Tonal Structure of Kikuyu" (ကစ်ကူးယူးဘာသာစကား သဒ္ဒဗေဒ တည်ဆောက်ပုံ, ၁၉၄၀) တို့ဖြစ်ကြသည်။ မြန်မာဘာသာစကား သဒ္ဒဗေဒတည်ဆောက်ပုံနှင့် သဘောတရားများကို ဦးဖေမောင်တင်နှင့် တွဲဖက်၍ "A Burmese Phonetic Reader" ဟူသောအမည်ဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာကြာ နိုင်ငံတကာသဒ္ဒဗေဒအသင်း၏ ဂျာနယ်ဖြစ်သော Le Maître Phonétique ၏ လက်ထောက်စာတည်းမှူးလည်းဖြစ်သည်။ ၁၉၃၇ တွင် လေဖြတ်သောကြောင့် အသက် (၅၅) တွသ် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ဂျုံးစ်က သူမ၏ နာရေးသတင်းတွင် "ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကောင်းဆုံး သဒ္ဒဗေဒပညာရှင်များအနက် တစ်ဦး" ဖြစ်သည်ဟူ၍ ရေးသားခဲ့သည်။
Armstrong၊ L. E. (1923)။ An English Phonetic Reader။ The London Phonetic Readers။ London: University of London Press။ hdl:2027/uc1.$b257662။
Armstrong၊ L. E.; Pe Maung Tin (1925)။ A Burmese Phonetic Reader: With English translation။ The London Phonetic Readers။ London: University of London Press။
Armstrong၊ L. E.; Ward၊ I. C. (1926)။ Handbook of English Intonation။ Cambridge: Heffer။ [Second edition printed in 1931.]
Armstrong၊ L. E. (1932)။ The Phonetics of French: A Practical Handbook။ London: Bell။
"The Phonetic Structure of Somali" (1934). Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin 37 (Abt. III, Afrikanische Studien): 116–161. [Reprinted. Farnborough: Gregg. 1964. တမ်းပလိတ်:Hdlတမ်းပလိတ်:Free access. Archived from the original on 18 October 2017.]
Coustenoble၊ H. N.; Armstrong၊ L. E. (1934)။ Studies in French Intonation။ Cambridge: Heffer။
Armstrong၊ L. E. (1940)။ The Phonetic and Tonal Structure of Kikuyu။ London: International African Institute။ [Reprinted. London: Routledge. 2018. doi:10.4324/9781315104478]
↑ Armstrong ကို ရိုးရာစဉ်ဆက်အရ "အမ်းစထရောင်း" ဟု ဖလှယ်ရေးသားကြသော်လည်း အနီးစပ်ဆုံးအသံထွက်မှာ "အားမ်းစ်ထရောန်င်" ဖြစ်သည်။ အဆုံးသတ် 'ng' ကို (ငသတ် '်', nasalized sound) သံပိတ်၍ ထွက်ရသည်။
↑ Jones, Daniel (January–March 1938). "Lilias Armstrong†". Le Maître Phonétique 61.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လစ်လီယာ့စ်_အမ်းစထရောင်း&oldid=622814" မှ ရယူရန်
၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၄:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၄:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။